Fanombanana ny orinasa Asian Transformative Pharmaceutical Products Company Limited
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fanombanana ny orinasa Asian Transformative Pharmaceutical Products Company Limited
Everest Medicines ("Everest" na ny "Orinasa"), orinasa biopharmaceutika mifantoka amin'ny fampivelarana sy fivarotana vokatra pharmaceutika manovaova izay mamaly ny filàna ara-pitsaboana tsy mety ho an'ny marary any Azia, dia nanambara androany fa nividy vola 1,095,000 mitovy amin'ny 50 tapitrisa HK$ eo ho eo. ao amin'ny tsena misokatra amin'ny vanim-potoana nanomboka ny 4 Oktobra 2021 ka hatramin'ny 29 Oktobra 2021, amin'ny salan'isa HK $ 45.63 isaky ny anjara. Ny antsipirian'ny fifanakalozana tsirairay dia hita ao amin'ny fizarana mpampiasa vola ao amin'ny tranokalan'ny orinasa.
Ny famerenam-bola dia natao teo ambanin'ny programa famerenam-bola HK $ 100 tapitrisa nambara tamin'ny 30 aogositra 2021. Amin'ny vidin'ny anjara amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia mino fa ny anjarany dia mivarotra amin'ny fihenam-bidy lehibe amin'ny sanda fototra, ary mety hanohy ny fividianana ny ampahany amin'ny tsena misokatra. Ny Orinasa dia manolo-tena tanteraka amin'ny famoronana lanja ho an'ny tompom-bola ary manana faharesen-dahatra mafy amin'ny fomba fijery ho avy. Tamin'ny 30 jona 2021, ny orinasa dia nanana vola RMB3,971.0 tapitrisa sy vola mitovy.
Ny orinasa dia hanao ny fividianana ampahany rehetra mifanaraka amin'ny memorandum sy ny andininy momba ny fikambanan'ny Orinasa, ny Fitsipika mifehy ny lisitry ny Securities amin'ny The Stock Exchange of Hong Kong Limited, ny Codes on Takeovers and Mergers and Share Buybacks, the Companies Law of ny Nosy Cayman sy ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery rehetra izay iharan'ny orinasa.